नीता अम्बानीको हातेझोलाको दाम २.६ करोड ! – Khabar batika
असार १७ गते २०७६
नीता अम्बानीको हातेझोलाको दाम २.६ करोड !
रियलायन्स फाउन्डेशनकी अध्यक्ष नीता अम्बानीको हाते झोलाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । उनको हर्म्स हिमालया बर्किन ब्यागको मूल्य २.६ करोड भारतीय रुपैयाँ भएको बताइएको छ ।
यो ह्यान्डब्याग २४० हिराजडित छ । इन्स्टाग्राममा शेयर गरिएको तस्बिरमा नीता अम्बानीसँग करिश्मा र करिना कपुर पनि छन् ।
नीता अम्बानी ह्यान्डब्यागसहित उभिएकी छन् । यो तस्बिर करिश्मा कपुरले इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी हुन् ।
ब्रिटिस अक्सन हाउस क्रिस्टिज डटकमका अनुसार हर्म्स हिमालया बर्किन ब्याग ह्यान्डब्याग संकलनमा सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
नीता अम्बानीको ब्यागमा १८ क्यारेटको सुन र २४० हीरा लगाइएको छ । बर्किन ब्यागको मूल्यका लागि र सेलिब्रेटीले किन्ने ब्यागका रुपमा चर्चित छ । यसको नाम बेलायती नायिका तथा गायिका जेन बर्किनका नाममा राखिएको हो ।
कानुन भन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने : तनहुँका प्रहरी प्रमुख सिलवाल
Samundra Poudel 1 year ago
मदन तिमल्सेना, बैशाख ३ तनहुँ प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भइ आएका प्रहरी उपरिक्षक विनोद सिलवालले आज मंगलबार पत्रकारहरु संग नव बर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्दै आफ्ना योजनाहरु जानकारी गराएका थिए... Read More
जलपान भन्दै व्यास नगरपालिकाले बिज्ञप्ती निकाल्यो
व्यास नगरपालिकाकाे ३१ अाै नगरसभामा मदिरा सेवनकाे बिषयलार्इ लिएर चर्काे टिकाटिप्पणी भएपछि व्यास नगरपालिकाले त्यसप्रति कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । व्यास नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार प्रेस बिज्ञप्ती... Read More
जबरजस्ती करणी मुद्दाकाे आराेप लागेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाएका छन । जिल्ला अदालत काठमाण्डाैका न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरालाई साेमबार सफाइ दिएको हो । अदालतले सफाइ दिएसँगै पुर्पक्षका लागि... Read More
सडक सुरक्षा पढाउँदै विज्ञटोली
सागर पौडेल दमौली – सवारी चलाउन जानेपनि पूर्णरुपमा ज्ञान नहुदाँ दुर्घटना हुने गर्छन् । दुर्घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेतना जगाउँन सडक सुरक्षा विज्ञ टोली तनहुँ आएको... Read More